Laminating စက် China Manufacturers & Suppliers & Factory
လှီး Rewinding စက်စီးရီး ( 65 )
စက်စီးရီး Coating ( 10 )
လမိုင်းစက်စီးရီး ( 13 )
Extrusion Coating စက် ( 17 )
CPP က CPE ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စက်စီးရီး Casting ( 15 )
Laminating စက် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Laminating စက် ထုတ်ကုန်များ)
တစ်ခုတည်းသော T DIE PE ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် extruder စက်မော်ဒယ် JF1200 တစ်ခုတည်းသော T Die Pe ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် extrududer စက်တစ်ခုတည်း T-DIE PE ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် extruder စက်သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိစက်ရုံမှရည်ညွှန်းထားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေဖြစ်သည်။...
PET BOPP ရုပ်ရှင် ၀.၀၁၂-၀၀၅၀mm ရုပ်ရှင်ဖုံးအုပ်စက် TB1100S PET BOPP ရုပ်ရှင် ၀.၀၁၂ မှ ၀.၀၅၀ မီလီမီတာအဖုံးအုပ်စက်သည် PET အတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော Coating Machine ဖြစ်သည်။ BOPP ရုပ်ရှင်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ထားသော Coating လုပ်သည့်ပစ္စည်း၊ အလူမီနီယမ်အလွှာဖြင့်ရိုက်ထားသောရုပ်ရှင်၊ လေဆာရောင်ခြည်သုံးအလှကုန်ပစ္စည်း၊...
SHANTOU GFTW-650D ရှိရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးအတွက်စက်ဖြတ်ခြင်း Shantou ရှိအမျိုးမျိုးသောရုပ်ရှင်ရိုက်ရန်စက်များ SHANTOU ရှိအမျိုးမျိုးသောရုပ်ရှင်ရိုက်ရန်စက်များသည် SHANTOU Unwind တွင်စက်ရပ်တန့်သောအခါအလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှု၊ တင်းကျပ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဗဟိုနောက်ပြန်နှင့်တင်းမာမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။ SHANTOU...
3D Holographic ရုပ်ရှင်ဖုံးအုပ်စက် TB1300 3D Holographic ရုပ်ရှင်အပေါ်ယံစက်ကိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံရန်အတွက်အသုံးပြုသည်၊ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: ၁) ။ ထိရောက်သောအကျယ် - 1300mm 2) ။ သင့်လျော်သောအခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်း - ပေရုပ်ရှင် 0.012-0.050mm ၃) အများဆုံးစက်မြန်နှုန်း: 80m / min ၄) အများဆုံးပြေးနှုန်း: 60m /...
ချောမွေ့စွာလေဆာ holography ဖောင်းကြွစက်
ချောမွေ့စွာလေဆာ holography ဖောင်းကြွစက်မော်ဒယ် JGMY-1200 S အီလက်ထရောနစ်လေဆာ holography ဖောင်းကြွစက်မော်ဒယ် JGMY-1200 သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအထူးထုတ်လုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ စက်၏တည်ဆောက်ပုံသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးမြင့်မားသောအလုပ်လုပ်မှုတိကျမှု၊...
GHJ1100B ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်တပ်စက် ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့်ဖယ်ရှားသည့်စက်သည်အဓိကအားဖြင့် web metalized paper ကို transfer သို့မဟုတ် peeling ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် rewinding & slitting web သို့မဟုတ် roll roll paper ထုတ်လုပ်သည့်နည်းစနစ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: ၁) ။ သင့်လျော်သောပစ္စည်းပမာဏ: 40-250gsm...
အမြင့် Glossy စက္ကူအပေါ်ယံပိုင်းစက် GZTB
မြင့်မားသော gloosy စက္ကူအပေါ်ယံပိုင်းစက် GZTB မြင့်မားသော gloosy စက္ကူအပေါ်ယံပိုင်းစက် GZTB သည် 70-250 g / ㎡မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသို့မဟုတ်မွေ့တည့်မှင်စက္ကူထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကော်မာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပြောင်းပြန်လွှဲပြောင်းထားသောအဖုံးပစ္စည်း၊ စိုစွတ်သောအပေါ်ယံလွှာအလေးချိန် ၂၅-၇၅ ဂ / adapted၊...
duplex အပေါ်ယံပိုင်းခေါင်းကိုဘက်ပေါင်းစုံ pape အပေါ်ယံပိုင်းစက်
duplex အပေါ်ယံမျက်နှာပြင် multifunction pape အပေါ်ယံပိုင်းစက် TB2-1600 Duplex အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော pape coating စက်သည် BOPP, PET စသည်တို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအပေါ်ယံလွှာသုတ်လိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။ reel-up material ၏ခိုင်ခံ့သောလိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ဆွဲအားရှိသော web roller...
ရွှေငွေအ paperboard အပေါ်ယံပိုင်းစက်
ရွှေငွေရောင် paperboard အပေါ်ယံပိုင်းစက် ZFT1100 ရွှေရောင်ငွေရောင်စက္ကူအပေါ်ယံလွှာသည်အလွိုင်း၊ အရောင်၊ မောင်းနှင်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပါး (၇-၁၀μ)၊ PET Metalized film (12-38μ)၊ ။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းခြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါအာမခံပါတယ် အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို ၁) ။...
Multilayer Co-extrusion အလွှာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
JF4300 လိုင်း productin M ulti-layer Co-extrusion အလွှာ Multilayer Co-extrusion အလွှာအလွှာထုတ်လုပ်ခြင်းလိုင်းအလွှာပူး တွဲ၍ extrusion အလွှာ lamination productin line သည် PE, PP ပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဆန့်နိုင်အားကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်သတ္တုများသွန်းလောင်းခြင်းနည်းပညာ (ဥပမာ PET film စသည်) သတ္တုစပ်သွန်းလောင်းခြင်း...
ထုပ်ပိုး: SEAWORTHY သစ်သားသို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်း
ရုပ်ရှင်လှိမ့်သည့်စက် Rewinding Machine SHANTOU GHJ1200A1 အသုံးပြုခြင်း - ပလတ်စတစ်ဖလင်နောက်ကျောစက်သည်ပလတ်စတစ်အမျိုးပေါင်းအားလုံးကိုပြန်လှည့်ရန်သင့်တော်သည် အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: 1) ။ ထိရောက်သောအကျယ်: 200-600mm 2) ။ လှည့်ပတ်အချင်း: φ700mm 3) .Rewind အကျယ်: 12-600mm ၄) နောက်ကျောအချင်း: φ700mm 5) .Rewind...
အပူခံလိုင်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း TB1800 အသုံးပြုခြင်း။ Thermal film Coating and laminating စက်သည်ကြွေထည်ပစ္စည်း BOPP, PET ၏အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ခိုင်ခံ့သောအလိုက်အံ ၀ င်နိုင်သည့် ANILOX roller တိုက်ရိုက်ရိက္ခာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော ဦး ခေါင်းစနစ်၊ အဖုံး 1-8g / m2၊ 4...
မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်စက် GHJ900A1 အသုံးပြုခြင်း -...
dual- ဆုံလည် Slitter Rewinder စက်
ထုပ်ပိုး: SEAWORTHY သစ်သားသို့မဟုတ်အဝတ်အစားတွေ
dual- ဆုံလည်လျှံ Rewinder စက် GFTW1280C2 dual- ဆုံလည် Slitter Rewinder စက် dual-Turret slitter rewinder စက်အလယ်ဗဟို winders နှင့်စင်တာ / မျက်နှာပြင် winders ပါဝင်သည်။ Dual-Turret Slitter Rewinder Machine အဓိကအားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသောကျဉ်းမြောင်းစေရန်အတွက် duplex winders များသည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၊...
duplex ရိုး slitter rewinder Duplex Shaft Slitter Rewinder Duplex အလယ်ဗဟို slaft slitter rewinder စက်တွင် center winders နှင့် center / surface winders များပါ ၀ င်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသောအကျယ်ကိုဖြတ်ရန်အတွက် duplex winders သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၊...
PET Sequin Film Coating Machine TB1100 ၁။ Film Coating Machine TB Sequin Film Coating Machine TB1100 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှည်ဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်နည်းပညာကိုရည်ညွှန်းသောအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ စက်တစ်ခုလုံးတည်ဆောက်ပုံသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးမြင့်မားသောအလုပ်လုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။...
သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PET sequins စာရွက်အဖုံးအုပ်ထားသော TB1500 စက်
သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PET sequins စာရွက်အဖုံးအုပ်ထားသော TB1500 စက် ၁။ Film Coating Machine သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PET sequins စာရွက်ကြမ်းခင်းဖုံးအုပ်စက် TB1500 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှည်ဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်နည်းပညာကိုရည်ညွှန်းသောအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် PET Sequin film Coating Machine TB1100 ၁။ Film Coating Machine မြန်နှုန်းမြင့် PET Sequin ရုပ်ရှင်ဖုံးအုပ်စက် TB1100 ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရှည်ဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်နည်းပညာကိုရည်ညွှန်းသောအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။...
Jumbo Roll Slitter Rewinder GDFQ3000 ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: Sunny Machinery Factory အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အဓိကနှင့်အလယ်အလတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရုပ်ရှင်နှင့်ပလတ်စတစ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ သတ္တုပလတ်စတစ်ဖလင်၊...
GDFQ4500 ဖြတ်ပြီးကြီးမားသောနောက်ပြန်အချင်း ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: Sunny Machinery Factory အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အဓိကနှင့်အလယ်အလတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရုပ်ရှင်နှင့်ပလတ်စတစ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ သတ္တုပလတ်စတစ်ဖလင်၊...
Plastic Film Slitting Machine GDFQ4500 ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: Sunny Machinery Factory အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အဓိကနှင့်အလယ်အလတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရုပ်ရှင်နှင့်ပလတ်စတစ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ သတ္တုပလတ်စတစ်ဖလင်၊...
Corona ကုသမှု GFTW-1500C ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်စက်
Corona ကုသမှု GFTW-1500C ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်စက် Corona ကုသမှုဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော Slitting Machine တွင်အလယ်စက်နှင့်ဗဟို / မျက်နှာပြင်တပ်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ Corona ကုသမှုဖြင့်ရုပ်ရှင်ဖြတ်တောက်စက် ကျဉ်းမြောင်းသောအကျယ်ဖြတ်ရန်အတွက် duplex winders သည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်သည်၊ အလျားလိုက်အပေါက်ကိုထိန်းချုပ်သည်။...
အရည်ပျော်လွင့်ယက်မဟုတ်သော Slitter Rewinder စက် GFTW-3400
အရည်ပျော်လွင့်ယက်မဟုတ်သော Slitter Rewinder စက် GFTW-3400 အရည်ပျော်မှုမရှိသောအချည်မျှင်စက်ပြန်စက်စက် GFTW-3400 သည်အဓိကအားဖြင့်မျက်နှာဖုံး၏ယက်ထည်များကိုဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။...
PVC ကြမ်းပြင်ကြွေပြားဖြတ်စက်စက် Model FQ-1300 ၁။ PVC ကြွေပြားကြွေပြားဖြတ်စက်ကို SMF (Sunny Machinery Factory) မှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် PVC ကြမ်းခင်းကြွေပြားများ၊ ဇိမ်ခံဗီနိုင်းကြွေပြားများ၊...
OPP CPP က Ffilm Slitter နှင့်ပြန်ရစ်စက်
စူပါမြန်နှုန်း Slitter ပြန်ရစ်စက်ဂျမ်ဘိုလိပ်
အရည်ထုပ်ပိုးစီးရီး extrusion အပေါ်ယံပိုင်းစက်
ဂျမ်ဘို Roll Slitter ပြန်ရစ်စက်
အကြီးစား Roll Slitter ပြန်ရစ်
Laminating စက် Lamination စက် Coating Coating Laminator စက် co-Extrusion Coating စက် လှီး Rewinding စက် မြှေး Coating စက် TPU Extrusion စက် duplex Slitter စက်